Tosika sy fameno ihany… | NewsMada
Eny, tena ilaina ilay Tosika fameno. Samy mahatsapa izany na ny mpitondra na ny vahoaka entina. Izay anarany omena azy eo, na “Vatsy tsinjo”, na “Sosialim-bahoaka”, na “Tosika fameno” fa ny fantatry ny maro, anatin’ny fotoan’ny ady mafy izao ka tsara fitontona izay mety ho fanampiana rehetra, indrindra ny sakafo.
Saingy, “tosika” sy “fameno” araka ny anarany ihany izany… Aoka tsy hisy diso hevitra ny mpisitraka sy ny te hisitraka azy. Tsy mahavita taona, tsy mahavita volana akory io. Vonjy ranovaky, fanampiana hameno ny tsy ampy, tosika fotsiny ihany avy amin’ny fanjakana ho an’ny vahoaka sahirana.
Ny tiana hahatongavana, tsy foto-pivelomana ho an’ny ankohonana akory. Vahaolana vonjimaika fa tsy vahaolana maharitra. Mila mipetraka tsara any an-tsain’ny rehetra izay. Rariny dia rariny raha samy te hisitraka izany avokoa, na ireo lazaina ho manan-katao aza. Firy koa anefa ny mbola manan-katao amin’izao vanim-potoana izao, raha oharina amin’ny isan’ny vahoaka malagasy? Samy miandrandra ny vary iray kitapo, arahina menaka sy fanampin-daoka avokoa…
Sitrany ahay… “Tosika fameno”. Izay ny lalan-tsaina tokony hitondrana azy. Efa hita ny lesoka maro tamin’ny fizarana ny “Tatsy tsinjo” sy ny “Tosika fameno” andiany voalohany. Nanambara ireo mpitondra, nosoloin’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta, ny governora ary ny ben’ny Tanànan’Antananarivo tena, fa hisy fandaminana matotra kokoa hatao. Haato aloha, hahafahana mandamina araka ny baikon’ny filoha ka samy hisitraka izany avokoa ny isan-tokantrano. Mbola hisy, araka izany, fa mila mahandry tantana…
“Tosika fameno” fa tsy fanafody na vakisiny! Mila mipetraka ao an-tsain’ny mpisitraka koa izay, na hoe “aleo maty rahampitso toy izay maty anio aza”. Misy aza ny mahavoaka vava hoe “aleo voan’ny Corona toy izay matin’ny hanoanana”. Eny, tsy ifanomezan-tsiny izany. Zava-misy tsy azo afenina rahateo. Kanefa, famehana ara-pahasalamana no mahatonga ny krizy mitoetra ka vahaolana ara-pahasalamana ny fanefitra voalohany. Mety efa mankaleo ny hoe “samia mitandrina” fa aleo atao hoe “samia miezaka araka izay takatry ny sainy mba ho velon’aina, ho tra-pamonjena, mandra-pialan’ny valanaretina”.